Hoyga | Iskaashatada MyCoolClass
# Macallin Kacdoon
MyCoolClass waa an iskaashatada macallimiinta caalamiga ah oo ay la leedahay barnaamijkeeda waxbaridda ee internetka. We xirmaan macallimiinta ugu fiican adduunka oo dhan oo leh kuwa ugu xiisaha badan bartayaasha madadaalo, furfuran iyo dhaqan kala duwanaansho. Maxaa intaa ka badan, we macalimiinta fursad ayuu siinayaa leeyihiin goobahooda shaqo.
Shaqaale-iskaashi ahaan, waxaan raacnaa toddobada mabda 'ee ay dejisay Isbahaysiga Iskaashatada Caalamiga ah. Waxaan nahay ka diiwaangashan Boqortooyada Ingiriiska bulsho ahaan iyo xubno ka tirsan iskaashatooyinka UK.
KU SOO BIIR #TACABKA MAANTA
Adaa madax ah. Xor ayaad u tahay inaad casharadaada ku abuurto dariiqaaga. Adiga ayaa xakameynaya ballansashadaada iyo jadwalkaaga waxaadna dejineysaa qiimahaaga.
Way fududahay in ardayda lagu maareeyo barxadeena barida.
Wadaagista shaashadda, maareynta faylka, isticmaalka sabuuradda, iyo abaabulka maaddadu waa mid fudud oo dareen leh. Barxadda waxaa lagu heli karaa 10 luqadood hadda iyo in ka badan ayaa soo socota!
Mushahar ka fiican, faa iidooyin wanaagsan iyo wadarta daahfurnaan.
Macallimiintu waxay 19% ka bixiyaan mushaharkooda billaha ah iskaashatada. Tani waxay daboolaysaa kharashka hawlgalka iyo tabarucaadda sanduuqa guud si ay nooga caawiso koritaanka. Qeyb ka mid ah 19% waxay sidoo kale galeysaa waqtigaaga mushahar bixinta! Ma lihin saamileyaal goynaya. Xubin ahaan, waxaad iska leedahay shirkadda sidoo kale, waxaadna leedahay fikraddaada ku saabsan waxa ku dhacaya macaash kasta.
Fasax mushahar ah
Macallimiintu waxay ururin doonaan 7 maalmood sannad kasta oo mushahar jirro ama shaqsiyeed ah oo mushahar qaata iyadoo loo eegayo tabarucaaddooda iyo celceliska mushaharkooda maalinlaha ah. Waxaan rabnaa macalimiinta inay naftooda daryeelaan markay jiran yihiin ama ay qaataan fasax iyagoo aan lumin dakhliga soo gala. Waxaad soo saari kartaa oo kaliya waxaad gelisay.
Ganaax ama ganaax lama saari doono joojinta haddii aad jiran tahay ama aad xaalad degdeg ah qabtid.
Waxyaabo xun ayaa dhaca. Haddii aad haysato xaalad degdeg ah oo qoys ama aad u baahan tahay inaad dhawr maalmood fasax qaadato, iska dhaaf fasalladaada oo ogeysii kooxda taageerada.
Markasta, goob kasta, meel kasta
Madalkeenu wuxuu shaqeeyaa meelkasta oo aad joogtid iyo meelkasta oo wadadu kugu qaado. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa khadka internetka. Barnaamijkeennu sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa Shiinaha iyada oo aan xaddidneyn.
Waxaad gacan ka geysaneysaa go'aannada muhiimka ah.
Macallin kasta wuxuu marin u heli doonaa degel xubna keliya ka go'an iskaashatada, oo leh macluumaad maaliyadeed, xeerar iyo qawaaniin, macluumaadka doorashada, doorashooyinka, iyo inbadan. Xubin kasta wuxuu sidoo kale u tartami karaa Golaha Maamulka.
Abuur oo iskaashi
Bilow ama ka mid noqo Kooxda Abuurista oo aad horumariso koorsooyin macallimiinta kale. U soo gudbi koorsooyinkaaga si ay u ansixiyaan Guddiga Manhajka ka dibna Kooxdayada Naqshadeynta ayaa noloshaada u soo noolayn doonta! Adiga iyo kooxdaada waxaad kasban doontaan lacag-bixinno markii koorsadiina la iibiyo!
Caawi kuwa aadka ugu baahan
MyCoolClass wuxuu qorsheynayaa inuu bilaabo barnaamij siinta umeerin lacag la'aan ah caruurta dhaqaala ahaan tabaaleysan iyadoo la abuurayo sanduuq aan faa'iido doon ahayn.
Lacag dabacsan oo hufan
MyCoolClass wuxuu leeyahay xulashooyin lacag bixin oo kaladuwan si loo hubiyo in mushahar lagaa siiyo sida ugu macquulsan.
Dhamaan macalimiinta waa la soo dhaweynayaa.
Haddii aad u-qalantid inaad barato maadooyinka aad bixiso, waa lagugu soo dhaweynayaa. Kuma danaynayno cidda aad tahay, meesha aad ka timid, meesha aad ku nooshahay, iyo luqadda aad ku hadasho. Takooriddu maahan mid qabow oo meelna kuma leh waxbarashadda.
Haddii aad jeceshahay waxa aan sameyneyno oo aad rabto inaad muujiso taageerada sida aan u korayno,
tabarucaadkaaga waa la mahadiyey.
Ku deeqo adoo adeegsanaya GoFundMe
Ku deeqo adoo adeegsanaya PayPal
Iskuduwaha Madal-Macallin leeyahay
Haa, waa sax !!! Dhammaan macallimiintu waxay noqonayaan milkiile isla markaana saamiga shirkadda ku leh. Iskaashi ahaan, ma jiro "Big Boss" ama maalgashadayaal sameeya go'aannada oo dhan. Xubin kasta wuxuu ku leeyahay saamiga shirkadda iyo cod loo siman yahay.
Ka Qaybqaadashada Dhaqaalaha
Fasax Shaqsiyeed La Bixiyay
Tababar & Waxbarasho
Majiraan Xeerar Draconian ah
Shuruudaha iyo Siyaasadaha
Codso inaad noqoto Macallin
Buugga Calaamadaha & Astaanta
2021 MyCoolClass Iskaashatada Xaddidan | Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Ka diiwaangashan Boqortooyada Midowday sidii bulsho diiwaangashan oo hoos timaada Xeerka Iskaashatooyinka iyo Bulshada Dheefta Bulshada 2014. Diiwaangelinta Lambar 4790
XWaxaan u isticmaalnaa kukiyada websaytkayaga si aan kuu siino waayo -aragnimada ugu habboon annagoo xusuusan dookhyadaada iyo booqashooyinka soo noqnoqda. Adigoo gujinaya "Aqbal Dhammaan", waxaad oggolaatay adeegsiga DHAMMAAN cookies -ka. Read MoreQalabka cookie-ka Aqbal Dhamaan
Waa maxay cookies?
Cookie -ku waa xog yar (faylka qoraalka) oo mareegaha - marka uu booqdo isticmaale - uu weyddiisto biraawsarkaaga inuu ku kaydiyo aaladdaada si loo xasuusto macluumaadka adiga kugu saabsan, sida doorbidkaaga luqadda ama macluumaadka gelitaanka. Kukiyadaas annaga ayaa dejineyna waxaana loogu yeeraa cookies-ka koowaad. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa kukiyada dhinac saddexaad-kuwaas oo ah kukiyada ka yimid domain ka duwan kan bogga websaydka aad booqaneyso-dadaalladayada xayeysiinta iyo suuqgeynta. Fadlan eeg annaga Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah si aad wax badan uga ogaato sida aan u isticmaalno buskudyada.
Waxaan u isticmaalnaa buskud dhowr sababood sida;
si loogu hawlgalo qaybaha muhiimka ah ee mareegaha MyCoolClass,
si kor loogu qaado khibradaada isticmaalka MyCoolClass,
si aad si fiican ugu fahamtid sida dadku u adeegsadaan Websaydhka Tani waxay sidoo kale ku jiri kartaa cookies-ka websaydhada saddexaad ee warbaahinta bulshada.
Waad beddeli kartaa goobahaaga cookie-ga wakhti kasta adoo raacaya tilmaamaha hoose ee bogga qaybta "Maamul cookies-kaaga".
Waa maxay cookies for?
Waxaan u adeegsannaa cookies iyo tikniyoolajiyada kale ee raadraaca ujeedooyinka soo socda:
Si loo falanqeeyo sida booqdayaasha, adiga degelkeenna
Si loo falanqeeyo caan -ka fasallada iyo koorsooyinka
Si aad nooga caawiso inaan u sameyno waxqabad iyo ka kooban waxyaabaha ku saabsan degelkeena
Maareynta dookhyadaada cookie
Waxaad ku jimicsan kartaa dookhyadaada cookie-ka ee ku jira websaydhka MyCoolClass, sidoo kale waxaad jeclaan kartaa inaad ku xakameyso cookies-ka adoo adeegsanaya goobaha biraawsarkaaga. Inta badan daalacashada shabakadu waxay u oggolaadaan xoogaa xakameynta cookies-ka badankood. Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan buskudka, oo ay ku jiraan sida loo arko waxa la dhigay cookies, booqo www.aboutcookies.org ama www.allaboutcookies.org
Soo ogow sida loo maareeyo cookies-ka bog furayaasha caanka ah:
Si aad u hesho macluumaad laxiriira daalacayaasha kale, booqo shabakada kobcinta biraawsarka.
Si aad uga baxdo in uu dabagal ku sameeyo Google Analytics dhammaan bogagga internetka, booqo http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_wpfuuid 11 sano Cookie -kan waxaa adeegsada WPForms WordPress plugin. Cookie -ka waxaa loo adeegsadaa inuu u oggolaado nooca lacag bixinta ee fiilada inuu isku xiro gelitaannada isla isticmaale waxaana loo adeegsadaa astaamo dheeri ah sida ku darista Ka -tagitaanka Foomka.
daawaday_cookie_policy sano 1 Kukiyada waxaa dejiyay GDPR Kukiyada Oggolaanshaha Kukiyada si loo kaydiyo haddii adeegsadu oggolaaday adeegsiga kukiyada. Ma kaydiso wax xog shakhsi ah.
_fbp 3 bilood Kukiyadaan waxaa Facebook u dejisay inay ku soo bandhigto xayeysiisyada marka ay ku jirto Facebook ama madal dhijitaal ah oo ay ku shaqeyneyso xayeysiiska Facebook, kadib booqashada mareegaha.
fr 3 bilood Facebook wuxuu u dejiyaa cookie -kan si uu ugu muujiyo xayeysiisyada khuseeya isticmaaleyaasha isagoo dabagal ku sameeya habdhaqanka isticmaale ee shabakadda, bogagga leh pixel Facebook ama plugin bulsheedka Facebook.
HALKAN 1 sano 24 maalmood Kukiyada IDE ee DoubleClick ee Google waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo macluumaadka ku saabsan sida adeegsaduhu u isticmaalo mareegaha si uu ugu soo bandhigo xayeysiisyada khuseeya iyo sida ku cad astaanta isticmaalaha.
test_cookie 15 daqiiqo Test_cookie waxaa dejiya doubleclick.net waxaana loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo haddii baaraha isticmaalaha uu taageerayo kukiyada.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 bilood 27 maalmood Buskud ay dejisay YouTube si loo cabbiro baaxadda baaxadda ee go'aamisa in adeegsaduhu helo interface -ka cusub ama kan hore.
YSC fadhiga Kuki YSC waxaa dejiyay Youtube waxaana loo isticmaalaa in lagu dabagalo aragtida fiidyowyada ku duuban bogagga Youtube -ka.
aaladaha yt-fog-ku-xidhan marna Kukiyadaas waxaa lagu dejiyay iyada oo la geliyay youtube-fiidiyowyo.
yt-fog-qalab-id marna Kukiyadaas waxaa lagu dejiyay iyada oo la geliyay youtube-fiidiyowyo.
_ga 2 sano Kuki _ga, oo lagu rakibay Google Analytics, wuxuu xisaabiyaa booqdaha, kalfadhiga iyo xogta ololaha wuxuuna sidoo kale la socdaa isticmaalka goobta warbixinta gorfaynta goobta. Buskudku wuxuu kaydiyaa macluumaadka si qarsoodi ah wuxuuna u qoondeeyaa lambar si aan kala sooc lahayn loo abuuray si loo aqoonsado booqdayaasha gaarka ah.
_ga_QB4KJ2NX1F 2 sano Cookie-kan waxaa rakibay Google Analytics.
KORONTADA 16 sano 3 bilood 26 maalmood 7 saacadood Kukiyadaas waxaa lagu dejiyay iyada oo la geliyay youtube-fiidiyowyo. Waxay diiwaangeliyaan xogta tirakoobka si qarsoodi ah tusaale ahaan inta jeer ee fiidiyaha la soo bandhigay iyo goobaha loo adeegsado dib -u -ciyaar. Ma jiro xog xasaasi ah oo la ururiyo ilaa aad gasho koontadaada google, haddii ay sidaa tahay xulashooyinkaagu waxay ku xiran yihiin koontadaada, tusaale ahaan haddii aad gujiso "like" fiidiyaha.
Keydso & Aqbal